US/32A (7.6KW) Soo -saarayaasha & Alaab -qeybiyeyaasha | Shiinaha US/32A (7.6KW) Warshadda
Ganacsiga Korontada OCPP 1 ....
AC 2 * 22kw 64A EV Korontada ...
16A 32A 40A 48A Tamarta Cusub ...
Saldhigga Kaydinta EV Wall-Mo ...
Warshadaha EV -ga Maraykanka ...
Nooca 1 Heerka 2-Gaadhi-ku-rakibay EV Car Charger Wallbox oo leh Ansixinta ETL
Warshadda si toos ah Shiinaha EV Charging Point, Kaabayaasha Ku -dallacsiinta EV, Iyadoo hadafku yahay "cilad eber ah". Si loo daryeelo bay'ada, iyo soo -celinta bulshada, u daryeelo mas'uuliyadda bulshada shaqaalaha sida waajibaadkooda. Waxaan soo dhaweynaynaa saaxiibbo ka kala yimid adduunka oo dhan inay na soo booqdaan oo na hoggaamiyaan si aan u wada gaarno yoolka guusha-wada-jirka ah. Hadafkayagu waa inaan u horumarino alaabada hal -abuurka leh macaamiisha leh waayo -aragnimo wanaagsan OEM/ODM Soo -saaraha Shiinaha EV Charger.
Keen Saldhigyada Gaadiidka Korantada ee Ganacsiga Ganacsiga ee OEM oo wata Shahaadada ETL
Bixinta Saldhigga Bixinta Baabuurka OEM Shiinaha, Ku -dallacsiinta Degdegga ah, Waxaan ku dadaalnaa heer sare, horumar joogto ah iyo hal -abuurnimo, waxaa naga go'an inay naga dhigto "aaminaadda macaamiisha" iyo "xulashada koowaad ee alaabada qalabka mashiinnada injineernimada" alaab -qeybiyeyaasha. Naga dooro, wadaaga xaalad guul wada leh!
ETL 7.6kw AC EV Charger Oo wata Ocpp1.6J iyo Fiilada Nooca 1
Tayada Wanaagsan ee Shiinaha EV EV, Charger Car, Iyada oo leh adeeg heer sare ah iyo mid gaar ah, si wanaagsan ayaan u horumarinnay annaga iyo macaamiisheena. Anagoo adeegsanayna nidaam maamul oo tayo sare leh oo cilmiyeysan, tayo aad u wanaagsan iyo iimaan ka sarreeya, waxaan ku guuleysaneynaa joogsi wanaagsan waxaanna ku mashquulsaney anshaxaan Tayada Wanaagsan ee Shiinaha 32A Type1 SAE J1772 EV Charger. Khibrad iyo aqoon ayaa hubisa inaan marwalba ku raaxaysanaynay aaminaadda macaamiisheena hawlaha ganacsi. "Tayo", "daacadnimo" iyo "adeeg" waa mabda'ayaga. Daacadnimadeenna iyo ballanqaadyadeennu waxay si xushmad leh ugu jiraan adeeggaaga. Nala soo xiriir Maanta Wixii macluumaad dheeraad ah, hadda nala soo xiriir
AC Keenista US/32A (7.6KW)
Soo ogow sida badeecadaha hal -abuurka leh ee wadajirka ahi uga faa'iideysan karaan guriga, goobta shaqada, iyo meelaha kale ee dadweynaha. Ku -dallacsiinta degdegga ah ee lagu kalsoonaan karo ayaa ku habboon dhammaan EV. Ka faa'iideysiga korantada J1772 ee caalamiga ah fiilooyinka gawaarida korantada waxay la shaqeeyaan dhammaan EV & Plug-In Hybrid's ee Mareykanka & Kanada. Oo ay ku jiraan moodooyinka caanka ah sida, Chevy Bolt, Nissan Leaf, Ford Fusion, BMW i3, Chevy Volt, Toyota Prius, Chevy Spark, Jaguar I-Pace iyo Audi e-tron. Xitaa Tesla oo isticmaalaya qalabkeeda caadiga ah.